KULMIYE Party » Guddoomiyaha KULMIYE iyo Weftigiisa si Wayn loogu soo Dhaweeyey Deegaannada u Dhexeeya Berbera iyo Hargeysa Guddoomiyaha KULMIYE iyo Weftigiisa si Wayn loogu soo Dhaweeyey Deegaannada u Dhexeeya Berbera iyo Hargeysa – KULMIYE Party
Guddoomiyaha KULMIYE iyo Weftigiisa si Wayn loogu soo Dhaweeyey Deegaannada u Dhexeeya Berbera iyo Hargeysa
HomeGuddoomiyaha KULMIYE iyo Weftigiisa si Wayn loogu soo Dhaweeyey Deegaannada u Dhexeeya Berbera iyo Hargeysa
Abdaal (Xisbiga KULMIYE)- Guddoomiyaha Xisbiga KULMIYE, ahna murrashaxa Madaxweynaha Md. Muuse Biixi Cabdi iyo wefti ballaadhan oo uu hoggaaminayo, ayaa si weyn loogu soo dhaweeyey badiba magaalooyinka u dhexeeya Berbera iyo Hargeysa, kuwaas oo kala ah Daray-godle, Xamaas, Lafo-ruug, Abdaal, Dacar-budhuq iyo deegaamada u dhexeeya, waxaanna ku qaabilay dadweyne tiro badan oo ka mid ah taageerayaasha xisbiga KULMIYE, kuwaas oo lulayey caleemo qoyan iyo astaanta xisbiga KULMIYE.
Guddoomiye Muuse Biixi iyo weftigiisa si gooni gooni ah goobo fagaareyaal ah ugula kulmay dadweynaha is abaabulay ee soo dhaweynta diyaarka u ahaa, ayaa waxa meelahaasi hadallo ka jeediyey madaxdhaqameedka, aqoonyahanka, waxgaradka, madax-dhaqameedka, haweenka, dhallinyarada, siyaasiyiinta, xildhibaannada iyo haldoorka bulshadaas oo guddoomiyaha iyo weftigiisa u muujiyey taageero laxaad leh, iyagoo sidoo kalena warbixino ka siiyey xaaladaha deegaanka ee dad iyo duunyaba.
Xubno ka mid hormoodka deegaanka oo ay ka mid yihiin Oday Xaaji Muuse Xirsi (Muuse Dalab), Wasiirkii hore ee Waxbarashada Md. Xasan Xaaji Cabdilaahi (Xasan Gadhweyne), Maareeyihii hore ee dekedda Berbera Eng. Cali Cumar Maxamuud (Cali Xoor-xoor) iyo xubno kale oo halkaas ka hadlay, ayaa iyaguna shacabka deegaanadaas kula dardaarmay inay sii xoojiyaan taageerada xisbiga KULMIYE iyo murrashaxiisaba.
Guddoomiyaha iyo weftigiisa waxa hadhimo-sharafeed si heer sare ah loo agaasimay loogu sameeyey deegaanka Laasgeel oo ka tirsan gobolka Maroodi-jeex, waxaana hadhimada ka hor guddoomiyaha iyo xisbigiisu shacabka deegaankaas kala hadleen goob fagaare ah oo ay ku qaabileen haldoorka deegaankaasi.
Murrashaxa Madaxweynaha KULMIYE Md. Muuse Biixi Cabdi oo shacabka deegaannadaas mid walba gaarkiisa ula hadlay, ayaa si weyn ugaga mahadceliyey soo dhaweyntooda iyo sida xilkasnimada leh ee ay qayb waqtigooda ka mid ah u siiyeen, una muujiyeen taageeradooda xisbul-xaakimka.